Ny modely manaraka ny varotra anao | Martech Zone
Inona ny tetikadinao fanafihana fanarahana ny fitarihana varotra? Matahotra aho fa matetika dia tsy mahavita… mifanena amin'ny fanantenana ary avy eo tsy miraharaha ny fanarahana sy mijanona ao an-tsaina. Paikady sarotra ny hipetraka eo amin'ny toerany ary antony tsara hampiasa vola ao a CRM sy fivarotana mandeha ho azy toy ny mpanjifanay ao Salesvue.
MarketBridge dia orinasa iray manampahaizana manokana amin'ny fampitana ny elanelana misy eo amin'ny marketing sy ny varotra hanatsarana ny fahafahan'ny orinasa mamokatra fitarihana tsara kokoa ary hikatona. Novokarin'izy ireo ity infographic antsoina hoe, Torohevitra 9 momba ny fomba hanarahana ny fitarihana amin'ny karazana rehetra, izay manome modely fototra lehibe hikolokoloana sy hanaraha-maso.
Ahoana ny fomba hanaraha-maso ny fitarihana karazana rehetra
Use Big Data hianatra momba ny fitarihanao.
Safidio tsara ny mari-pandrefesana.
mamaly haingana hitarika.
Tantano ny fifandraisana voalohany.
Mampiasà mailaka mitarika fikarakarana.
Mandraisa andraikitra rehefa mitarika ianao vonona hiresaka.
Manambola amin'ny faran'izay tsara CRM Resources.
Diniho ny fanampiana avy any ivelany.
Manomeza torohevitra ho an'ny maimaim-poana.
Tags: hanarakamitarika fanaraha-masoinfographic fitsangatsangananamitarika fikarakaranasary mitaiza mitarikafikarakaranamitarika varotrafivarotana mitarika infographic
May 15, 2015 amin'ny 11: 13 AM